Ny adidy tsy an’olondratsy. Tongava mifidy – ACTUTANA
Ny adidy tsy an’olondratsy. Tongava mifidy
Ho anareo manana zo hifidy amin’ny Alarobia 07 novambra izao dia manentana anareo aho hanefa ny adidinareo amin’ny firenena sy ny tanindrazana.
Na iza na iza safidinareo dia raiso an-tanana ny fiainanareo sy ho avin’ny taranakareo amin’ny fanefana ny adidinareo sy amin’ny fandrotsahanareo ny vaton’izay olona heverinareo fa hampandroso ny firenena.
Izaho manokana dia tsy afaka mandray anjara amin’io fifidianana io, fa kosa manohana 100% ny kandida Ravalomanana.
Izay mahafantatra ahy dia mahalala fa tsy misy tombotsoako manokana izany fanohanana izany satria tsy niaina mivantana ny fitondrany 2002-2009 aho, ary tsy mieritreritra ny hiaina ny mandat 2019-2023 ho avy koa.
Ny mamparisika ahy aminy dia :
– Voalohany, ny vokatra azo tsapaitanana tamin’ny vina Madagasikara Amperin’Asa MAP 2002-2008, izay nosomparana nohon’ny fanesorana azy teo amin’ny fitondrana tamin’ny fomba tsy ara-démokratika.
– Faharoa, ny velirano Manifesto 2018-2023 izay atolony ho fampandrosoana an’i Madagasikara sy ny Malagasy.
Ianareo izay mbola Misalasala mikasika ny safidinareo dia mamporisika anareo aho hifidy an’i Ravalomanana N25.
Ho anareo izay efa manana izay safidinareo kosa dia vitao ny adidy na iza na iza safidinareo. Ary manantena antsika rehetra hanaiky izay vokatra eo.
Raha misy ny hosoka hitanareo dia raiso ny porofo ary ampitao @ fitsarana izany. aoka tsy ho eny andalambe intsony no hanaovana ny fitakiana, fa efa fantatra ny vokadratsiny.
Farany, Isika dia mijanona ho mpinamana foana na inona na inona ny safiditsika tsirairay. Ny tanjontsika rehetra dia ny ahita an’i Madagasikara mandroso. Ny olona heverina sy antenaina hitarika antsika amin’izany no mety Samihafa.
Ps: Azo zaraina, azo atao dika-petaka koa
En réponse à Njaka
:-), Mahaiza mifidy araka ny saina sy ny eritreritrao. Ny ho aavin’ny Firenena sy ny taranaka no banjino.
Efa hainao ilay numéro e!
Marina ny anao ny @ hoe » Raha misy ny hosoka hitanareo dia raiso ny porofo ary ampitao @ fitsarana izany. aoka tsy ho eny andalambe intsony no hanaovana ny fitakiana, fa efa fantatra ny vokadratsiny. «
ka indraindray koa ianao malefaka dia araraotiny ilay tsy vanona. Izay no mahatonga ny violences ..
Raha toa ka tsy tanteraka ireo dia dommage ho an’ny kandida-ko fa dia sendra ny marina mitavozavoza aho izany ka resin’ny lainga tsara lahatra …
Izaho indray aloha dia tsy higrevy na hitarika ny olona hi-grevy izany intsony raha mbola resaka éléction.
Eny fa na ho an’ny olona tohanako amin’ny heriko manontolo aza.
Efa ho herintaona izay no lazaina fa misy tentative de fraude massive amin’ity election ity, misy electeur 2 millions tsy hay hoe avy aiza.
Tokony efa hatramin’izay no niomana amin’izay, amin’ny fametrahana délégué isaky ny birao fandatsahambato ohatra, fampianarana ny délégué hametraka reserve na fitoriana raha misy halabato bevata. sns sns…
Raha toa ka tsy tanteraka ireo dia dommage ho an’ny kandida-ko fa dia sendra ny marina mitavozavoza aho izany ka resin’ny lainga tsara lahatra
za koa loha dia ho an’isany e
Izao no fotoana hanentànana ny olona handeha hidfidy rahampitso ry Monsieur l’admin.
Betsaka ny olona miditra ato amin’ity blog ity na dia tsy maneho hevitra aza,
ary manan-kavana, nàmana, mpiara-miasa afaka mifidy ihany koa izy ireo.
Affiche kisarisary genre : « votez » apetraka en permanence etsy ambony etsy, eo akaikin’ilay hoe « le plaisir de partager » ohatra.
Soson-kevitra mety ahitàna soa e…
MArina izany Rangita a! izay indrindra no anton’ity « tribune libre ity » mba hanentanana ny olona.
ary indrindra indrindra tsy hanenen’ireo izay tsy nifidy rehefa tafapetraka eo amin’ny toerany ny filoha vaovao na iza izy na iza.
Misaotra fa hifidy tokoa! Dia mirary soa.
Tsisy fisaorana ka!
Ho an’ny taninJANAKA
18/06/2021	3 commentaires
02/07/2018	23 commentaires
31/07/2021	22 commentaires